घरमा कुकुर पाल्नुभएको छ? होस गर्नुहोस् हुनसक्ला यस्ता समस्या – Health Post Nepal
२०७८ भदौ १६ गते ७:४८
कतिपय मानिसहरूलाई घरमा जनावर पाल्ने शोख हुन्छ। कतिले आफ्नो शोख पुरा घरमा कुकुर, विरालो, मुसा, चरा, इत्यादी पालेका हुन्छन्। तर कार्निभोर (मांसाहारी) जनावर पाल्दा मानिसलाई रोग सर्ने सम्भावना बढि रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
सार्स–कोभ–२ (कोभिड–१९) तथा साल्मोनेला नामक रोगहरू मानिस भन्दा पहिले जनावरमा सर्ने गर्दछ। जनावबाट यसले रूप परिवर्तन गरेर मानिसमा सारेको अध्ययनमा उल्ललेख छ।
त्यस्ता जनावरले जुनोटिक प्याथोजिनहरू किन बोकेका हुन्छन्? भन्ने तथ्य हालसम्म पनि पत्ता लगाउन सकेको छैन। तर वैज्ञानिकहरुको अनुमानका अनुसार जनावरहरुमा छुट्टै खालका इम्युन सिस्टम हुन्छन्। यि जनावरूले प्राकृतिक रुपमै यस्ता भाइरस र ब्याक्टेरिया बोकेका हुन्छन्।